मनोरञ्जन Archives » Page 196 of 409 » Etajakhabar
यमबुद्धकी पत्नी र बुबाको गुनासोः मिडियाबाट नचाहिँदो टर्चर भयो
माघ २२ गते- चर्चित र्‍यापर स्व. यमबुद्ध (अनिल अधिकारी) का परिवारले मिडियाले अनावश्यकरुपमा नचाहिने कुरालाई बढी उचालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । लण्डनमा आफ्नी श्रीमतीसँग रहँदै आएका यमबुद्धले गत महिना आत्महत्या गरेपछि उनी र उनको परिवारसँग जोडेर नचाहिँदो कुरालाई उचालिएको परिवारको गुनासो छ । यमबुद्धकी श्रीमती अस्मिता सेढार्इं गायब रहेको तथा उनको भावनामा ठेस पुर्याउने किसिमले मिडियाहरुले नचाह...
‘तिमीले जे भनेनी मान्छु’ का गायकले ल्याए अर्को नयाँ गीत ‘शंकाको घैलो’ (भिडियो सहित)
तिमीले जे भनेनी मान्छुको अपार सफलता पछि लोक तथा दोहोरी गायक किसान नेपालीले आफ्नो तेस्रो साङ्गीतिक कोशेली शंकाको घैलो बजारमा ल्याएका छन् । उमेश अधिकारीको शब्द तथा लय सृजना रहेको गीतमा गायक नेपालीलाई नव गायीका शोभा श्रेष्ठ आचार्यले साथ दिएकी छन् । हर्षित मुद्रामा भेटिएकी गायीका आचार्य हामीसँगको भेटमा कुराकानी गर्दै भन्छीन् मलाइ यो गीत उमेश भाइको मुखबाट पहिलो पटक सुन्दा नै मन परेको थियो अनि किसान ...
रामकृष्ण र यम बराल : प्रतिस्पर्धाविहीन सम्बन्ध
काठमाडौं - गायकद्वय रामकृष्ण ढकाल र यम बराल एक–अर्कालाई ‘बेस्ट फ्रेन्ड’ मान्छन् । आधुनिक तथा पाश्र्वगायनमा यी समकालीन गायक मित्रको आ–आफ्नै स्थान छ । उनीहरू लगभग एकै समयमा गायनमा उदाएका हुन् । तर, गायकका रूपमा स्थापित हुन रामकृष्णले यमले भन्दा निकै नै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । बारा जिल्ला स्थायी घर भएका रामकृष्ण बच्चैदेखि गाउँदै हिँड्थे । इलामका यम डिल्लीबजारस्थित विजय मेमोरियलमा आठ कक्षामा पढ्न थालेदेख...
तेरिया मगरको शानदार नेपाल इन्ट्री, उनले काठमाण्डौ टेक्दा यसरी उर्लियो मानवसागर (भिडियो)
ताजाखबर। भारतको टेलिभिजन च्यानल कलर्सको चर्चित रियालिटी शो 'झलक दिखलाजा'की विजेता तेरिया मगर नेपाल आएकी छिन् । बुटवलकी तेरियाले यसअघि जी टिभिको डान्स इन्डीया डान्स लिटिल मास्टर्स पनि जितेकी थिइन् । झलक दिखलाजा जितेपछि उनि पहिलो पटक नेपाल आएकी हुन् । शुक्रवार राती नेपाल आउँदा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सयौँ मानिसहरु स्वागतमा आएका थिए । भिडियोमा हेर्नुहोस् तेरियाको शानदार नेपाल इन्ट...
‘प्रेममा रहेका जोडी’ लाई सचेत गराउँदै आयो ‘लभ पर्नसक्छ’
काठमाडौँ, २१ माघ- गीतकार डा कृष्णहरि बरालको शब्द रहेको सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार ईश्वरी बरालको पहिलो गीति एल्बम ‘लभ पर्न सक्छ’ बजारमा आएको छ । गीतमा सङ्गीतकार गैरे सुरेशको सङ्गीत र ईश्वरीको स्वर छन् । नयाँ पुस्तालाई लक्ष्य गरेर रचित गीतमा ‘प्रेममा रहेका जोडी’लाई सचेत गराइएको छ । गायिका ईश्वरी ‘नेपाल एफएम’ नेटवर्क ९१.८ मा आबद्ध हुनुहुन्छ । गीतकार डा बराल र सङ्गीतकार गैरेले साङ्गीतिक क्षेत्रमा ...
विग आइकनको अडिसनमा नक्कली धुर्मुसले लास्टै हँसाएपछि … (भिडियो सहित)
माघ २१ गते- पोखरामा यतिबेला सातौं विग आइकनको अडिसन चलिरहेको छ । विग एफएमले हरेक बर्ष आयोजना गर्ने विग आइकनमा यसपटक करिब १२ सय प्रतियोगीहरुले प्रतिस्पर्धा गदैछन् । अडिसनमा बच्चादेखि वृद्धसम्मको सहभागिताले पनि आयोजक संस्था निकै उत्साहित बनेको छ । विग आइकन गायन प्रतिभाको प्लेटफर्म भएपनि एकजना प्रतियोगीले उपस्थित दर्शक तथा निर्णायकहरुलाई रमाईलो पार्नका लागि हाँस्यव्यङ्ग प्रस्तुती राखेर निकै मनोरञ्जन ...
म उसको काखमा बसेका बेला बुबाले देख्नुभयो : सन्नी लियोन
एजेन्सी । सन्नी लियोनीले पोर्न कर्मलाई बिर्सन चाहे पनि उनको पुरानो कर्मले बेलाबेलामा झस्काइरहन्छ उनलाई पोर्नका बारेमा सम्झना दिइरहन्छ । हनी चवन नाम च्यानसँग भिडियो अन्तरवार्ता दिँदै सन्नीले आफ्नो पुरानो विगत कोट्याउन भ्याइन् । उनलाई सोधीएको प्रश्नमा सनीले एक पटक उनका बुबाले आँफु र एक युवकलाई रंगेहात पक्रेको बताउँदा उनी लज्जित बनेकी थिइन् । यो कुरा उनी १८ बर्षर्की छँदाको भएको उनले बताइन् । ...
चलचित्र ‘यो साइनो माया’ को सबैलाई रुवाउने गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
माघ २१ गते- चलचित्र ‘यो साइनो मायाको’ गीत सार्वजनिक भएको छ । गीत वियोगान्त छ । अरुणकुमार प्रधानको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्र चैत्र ४ गते रिलिज हुँदैछ । ‘यो के भयो’ बोलको गीतलाई शिव परियारले गाएका हुन् भने कुन्दन थापाको शब्द तथा संगीत छ । चलचित्रको यो गीतमा जतिन ताम्राकार र डेब्यू नायिका रेश्मा घिमिरेको अभिनय छ । रामकुमार श्रेष्ठको निर्माण र बाबुराम नेपालीको छायांकनमा चलचित्र बनेको हो । हेर...
भाग्यमानी युवती, जो शाहरुख खानको एउटा सेल्फीमा देखिएकै कारण रातारात हिट बनिन्
माघ २१ गते- बलिउड अभिनेता साहरुख खानको एउटा सेल्फीकै कारण भारतमा एक युवती निकै हिट भएकी छिन् । २१ बर्षीय साइमा हुसेन अहिले सामाजीक सञ्जालमा निकै हिट भएकी हुन् । आफ्नो फिल्म ‘रइस’को प्रमोसनमा रहेका शाहरुख पुणेको सिम्बिओसिस कलेजमा आफ्ना प्रशंसकसँग सेल्फी लिएर सोशल मीडियामा पोस्ट गरेपछि ती युवती निकै चर्चित भएकी हुन् । शाहरुखको सेल्फीको कमेन्टमा शाहरुखको भन्दा ‘मिस्ट्री गर्ल’बारे बढी चर्चा हुन पुग्...
यसरी बन्यो ‘सिंगल छु’को भिडियो, मलिनाको आकर्षक नृत्य (भिडियो)
ताजाखबर। गायक बिपि वाग्लेको नयाँ गीत 'सिंगल छु'को भिडियो आउने तयारीमा छ । हालै मात्र यो गीतको भिडियो मेकिङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । मेकिङ् भिडियोमा नायिका तथा पूर्व मिस नेपाल मलिना जोशीको आकर्षक नृत्य छ । यो भिडियोमा मलिना मात्र होइन चर्चित र्‍यापर गिरिश खतिवडा पनि देखिनेछन् । गिरिशले यो गीतमा र्‍याप दिएका छन् । भिडियोमा पनि गिरिश र्‍याप गाउँदै गरेको देखिनेछन् । भिडियोमा विकाश लामिछानेको पनि अ...
Previous 1 … 195 196 197 … 409 Next